Dadka Dabaqada Hoose Ee Dalka Maraykanka oo Kulan Aqalka Cad Kula Yeeshay Madaxweyne Obama.(Hadhwanaagnews) Tuesday, July 10, 2012 New York-(HWN)-Madaxweynaha dalka Maraykanka Brack Obama ayaa wado qorshe uu ku doonayo inta uusan xilka Madaxweynenimo New York-(HWN)-Madaxweynaha dalka Maraykanka Brack Obama ayaa wado qorshe uu ku doonayo inta uusan xilka Madaxweynenimo ka dhamaanin uu ka hir galayo kaasi oo ah in dadka canshuurta laga qaado ee dabaqada hoose laga yareeyo.
Obama ayaa qorshahaan dhawaan soo bandhigay hayee shee waaxa uu hada dib usoo cusbooneysiiyay qorshahaasi oo dadka dabqada hoose ee dalka Maraykanka si aad ah usoo dhaweeyeen.
Madaxweyne Obama ayaa aqalka cad ee dalka Maraykanka loogaga arimiyo waxaa uu ku qaabilay qaar kamid ah dadka canshuurta
laga qaado ee dabaqada hoose ama aanan heysan lacagao ay dadka wax heysto kula tartami karaan isagoona ka hadlay sidii looga dhimi lahaa qarashaadka laga qaado ee canshuurta.
Obama ayaa sheegay in dadka dabaqada hoose hal sano ay ka faa iideysan doonaan canshuur dhimista waliba dadkaasi oo uu sheegay in ay yihiin dadka dhaqaalahoodu ka hooseeyo sanadkii 250 kun oo dollar kumana jiraan dadka dhaqaalaha buuran heysto.
Madaxweyne Obama ayaa doonayo in uu mar kale ku guuleysto jagada Madaxweynenimo oo iminka uga harsan tahay wax ka yar 4 bilood waxaana uu ku guda jiraa sidii uu shacabka reer Maraykan uga kasban lahaa codad ay siyaan markii la gaaro doorashada guud ee dalka Maraykanka ka dhaceysa dhawaan.